Internet waa hab aduunka oo dhan u furan iney isku dhaafsadaa waranka, cilmiga, ganacsiga iwm. Internet wuxuu ka kooban yahey Shabakadda Kumbuyuutarrada (Ingriis: Computer Network). Kuwaasoo xogta (Ingriis: Data) isku dhaafsadda habka loo yaqaan internet protocol. Wuxuuna ka kooban yahey malyuunaad shabakkadood (English: network) sida kuwa jaamacaddaha, ganacsiyada, dowladoha, shirkadaha. Kuwaas oo si wadojir ah isku dhaafsada xog kala duwan oo noocwalba leh sida sawiradda, fiidhyoowyada, codadka, iyo qoraaladda.
Taariikhda[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Mustaqbalka Internetka[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Sida hada ka muuqato Internetku wuxuu yareeyay waxyaabo badan oo ay ku bixi jirtay tamar sida tusaale ahaan waxaa maanta wax ka baran kartaa Internetka adigoo joogo xaafadaada ama gurigaada, Sidoo kale waxaa laga maarmay inaad maanta tegto meel ganacsi oo aad sheey ka iibsato adigoo heli karo dukaameysi Qadka (Online Shopping). Sidoo kale waxaad arkeysaa Shaneemooyinkii in laga maarmay oo Netka aad heli karto Film ama riwaayada aad rabtid. Sida ay leeyihiin Khubarada Aduunka in uu Netka noqon aduunka khiyaaliga ah Tusaale ahaan in qof jooga gurigiisa laga xakumo Maxkamad si Online ah. sidoo kale maanta waxaa laga maarmay in Qaamuusyadii Buugaagtii ha ahaado mid Cilmi iyo mid Taariiqeed
marka la fiirsho xaga isku xirka aduunka
Waxaa laga keenay "https://so.bywiki.com/w/index.php?title=Internet&oldid=173800"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 14:34, 6 Juun 2018.